सावधान ! के दिनमा २ पटक भन्दा बढी मुख धुनुहुन्छ ? – Nayabook
सावधान ! के दिनमा २ पटक भन्दा बढी मुख धुनुहुन्छ ?
यो पनि- साङ्लाले हैरान पारेको छ ? यी ७ उपायले बनाउछ भागाभाग
शहर होस् या गाउँ, भान्सामा हुने साङ्लाबाट आजित नहुने सायदै होलान् । शहरी क्षेत्रमा साङ्ला नियन्त्रण गर्न विभिन्न रसायनिक औषधि (विषादी) पनि प्रयोग गरिन्छ । तर, त्यसको प्रयोगबाट पनि प्रभावकारी नतिजा हात पार्न सकिदैन ।
त्यसमाथी मूल्यका हिसावले महङ्गा हुने त्यस्ता विषादी खरिद गर्ने कुरा सबैको आर्थिक क्षमताले नभ्याउने अवस्था पनि हुन सक्छ ।
त्यसो भए विषादी विनै साङ्लाबाट कसरी छुट्करा पाउने त ? घरेलु उपाय अपनाएर साङ्ला नियन्त्रण गर्ने विषयमा केही चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ ।
अण्डाको बोक्रोको प्रयोगले पनि तपाइले साङ्लालाई धपाउन सक्नुहुन्छ । प्राय घरमा अण्डा प्रयोग भइरहन्छ । तर, अण्डाको बोक्रा यत्तिकै फ्याकिन्छ, यदि यसको सही प्रयोग गर्नुभयो भने साङ्ला धपाउन सकिन्छ ।
अण्डाको बोक्रा कुनै कुनामा राखेमा त्यसबाट आउने स्मेलले पनि साङ्ला बाहिर निस्किने र भाग्ने गर्छन् ।